नेपालमा फेसबुक देखि पोर्न हब सम्म छ्यापछ्याप्ती काण्डै काण्ड !! - Experience Best News from Nepal
१रियलले सुरु गर्यो ‘अपरेसन पोग्बा’, पोग्बाको सपना जिदानसंग काम गर्ने !!
२पहिलो पटक यौन सम्पर्क गर्दै हुनुहुन्छ ? यो कुरामा ध्यान दिनुहोस् !
३गगन थापा बने शिक्षामन्त्री, अर्थ मन्त्रिमा रिजाल
४कान्सको रेड कार्पेटमा ‘गोल्डेन मर्मेड’ ऐश्वर्या (फोटो फिचर)
५‘सामाजिक सञ्जाल घातक’ सेलेना
६कपिल शर्मा पिता बन्ने !
७बक्स अफिसमा जात्रै जात्राको आक्रामक व्यपार २ दिनमा २ करोड
८रेकर्ड धारी मेस्सीलाई प्रतिष्ठित पीचीची अवार्ड
प्रकाशित मिति : बिहिबार, फाल्गुन ९, २०७५
काण्डहरुको भिडियो हेर्दा जिस्केर आफैँले भिडियो बनाए पनि आफैँले लिक गरेको देखिन्न । युवकले आफ्नो र युवतीको आइफोनबाट भिडियो खिचेको देखिन्छ । युवतीको आइफोनमा रहेको भिडियो लिक भएको दाबी आइरहेको छ । युवतीलाई उनको साथीले एप्पल आइडी बनाइदिएको र सोबारे ती साथी जानकार भएकाले साथीबाट यो लिक भएको दाबी पनि बजारमा आएका छन् ।
सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक भएको यो पहिलो काण्ड भने हैन । थरिथरिका काण्ड विभिन्न समयमा आइरहन्छन् । सेक्स काण्डको संख्या पनि उत्तिकै छ । जापान काण्ड सेलाउन नपाउँदै सामाजिक सञ्जालमा बस काण्ड आयो । बसमा सवार एक यात्रुले हस्तमैथुन गरिरहेको दृश्य थियो त्यसमा ।लगत्तै तोरीबारी काण्डको नाममा अर्को सेक्स क्लिप सार्वजनिक भयो । यसअघि पनि बेस्टुकाण्ड, एयरफोन काण्ड, फिटकिरी काण्ड लगायतका नाममा तालतालका सेक्स काण्ड आए सामाजिक सञ्जालमा ।
बसको सिटमा एउटी युवती आएर बस्छिन् । उनको ठ्याक्कै पछाडि आएर एक पुरुष बस्छन् । उनले ज्याकेट, चप्पल र खैरो ट्राउजर लगाएका छन् तर अनुहार देखिँदैन ।
केटीको अनुहार एकछेउबाट थोरै देखिए पनि चिनिँदैन । नीलो कुर्तामा बैजनी सल र सुरुवाल हेर्दा सरकारी कर्मचारीझैँ लाग्छ । त्यसपछि सुरु हुन्छ, केटाको अश्लील हर्कत । एक हातले भिडियो खिच्छन्, अर्कोले हस्तमैथुन गर्छन् । अन्तिममा थोरै माथि उठेर युवतीको कपालभरि वीर्य स्खलन गर्छन् । युवतीले थाहै पाउँदिनन् ।
हेर्दै आङ सिरिंग हुने यो भिडियो फेसबुक म्यासेन्जर गु्रपमा भाइरल छ । ‘नेपाली बस काण्ड’ शीर्षकमा यो भिडियो एडल्ड साइट पोर्न हब डटकममा अपलोड गरिएको रहेछ, झन्डै तीन महिनाअगाडि । उनकै अरू दुई भिडियोमा पनि बसभित्रै वीर्य फालेको देखिन्छ ।
यतिबेलै अर्को अश्लील भिडियो चर्चित छ । बन्द तर उज्यालो कोठाभित्र एक अधबैँसे क्रीडारत छन् । छेवैमा बसेर अरू दुई अधबैँसेले अश्लील भाषामा उनलाई उकासिरहेका छन् । एक जनाले मोबाइलबाट भिडियो खिचिरहेका छन् । युवतीको आवाज आउँदैन । त्यहाँको माहोल हेर्दा युवती रक्सीको बेहोसीमा भएजस्तो लाग्छ, पुरुषको आवाज मातेजस्तै सुनिँदैन ।
मोबाइलको पहुँच सहज भएपछि नेपालीको अश्लील भिडियो सार्वजनिक हुन थाल्यो । सामाजिक सन्जालको आगमन र इन्टरनेटको सहज पहुँचपछि यस्ता छाडा सामग्रीको संख्या अझ बढ्यो । नाम चलेका सेलिब्रिटीकै भिडियो बाहिरिए । कति युवतीले आत्महत्या गरे, कोही गुमनाम भए ।
ती भिडियोमा एउटा समान विशेषता हुन्थ्यो, आफ्नो यौन गतिविधि जानी/नजानी आफैँले खिचिएको हुन्थ्यो र सामान्य प्रकृतिका ती भिडियो सार्वजनिक हुन्थे । तर पछिल्लो समय बाहिरिएका अश्लील भिडियोका प्रवृत्ति नियाल्दा कहाली लाग्छ ।
सेक्स अघि महिलाहरुको रुचीको विषयमा नयाँ तथ्य सार्वजनिक !!
महिलाहरुले सेक्सका लागि कस्ता पुरुष राेज्छन् !
के नियमित जस्तो हस्तमैथुनले बाँझोपन बढाउँछ ?? महिला पुरुष दुवैले जान्नै पर्ने कुरा !!
हप्तामा यस दिन महिलाहरु हुन्छन् बढी सेक्सको लागि आतुर !
यस्तो छ यौन सम्पर्क गर्नुभन्दा अगाडी पिसाब फेर्नुको बेफाइदा !
यस्तो टेलिभिजन च्यानल जहाँ ब्रा खोलेर समाचार पढिन्छ ! (हेर्नुस भिडियोसहित)
यी अंगहरु ठुला हुने महिला अतिनै भाग्यमानी हुन्छन ! जान्नुहोस्
बिहे पछि किन बढ्छ महिलाको हिपको आकार ? हेर्नुस संक्षिप्तमा